Roobabkii Gu’ga oo ka curtay gobollo Ogaadeenya ka mid ah
Suxufiyiin Oromo ah oo la xidhxidhay
Eritereya oo diiday inay wada-xaajood ka gasho arrimaha soohdinta
Eritereya oo shardi ku xidhay ciidamo ay Soomaaliya u dirto
Iyo Barnaamij gaar ah oon ku faaqidayno waxyaabihii ay saxaafadda soomaalidu ka qortay arrimaha Itoobiya
Roobabkii Gu’ga ayaa si fiican uga curtay qaar ka mid ah gobollada Ogaadeenya, oo hadda ku jiray xilligii Jiilaalka. Gobollada uu roobka Gu’gu ilaa iyo hadda ka curtay waxaa ka mid ah gobollada Faafan, Nogob iyo gobollada dhinaca galbeedka ka xidha labadan gobol.
Maalmihii ugu denbeeyay oo dhan waxay roobab lixaad leh ka da’ayeen nawaaxiga magaalada Jigjiga. Waxay roobab midkan la mid ahi ka da’ayeen inta badan degmooyinka gobollada Jarar iyo Nogob, iyadoo dadwaynuhu ay aad ugu diirsadeen.
Xilliga Jiilaalka ee hadda sii dhammaanaya ma ahayn mid aad u kulul oo dhibaatooyin soo gaadhsiiyay xoolo-dhaqatada iyo dadwaynaha kale ee Soomaalida Ogaadeenya, hase yeeshee waxaa kulaylkiisa laga dareemay meelo ka tirsan gobolka Jarar.
Raadyaha afka Oromada ku hadla ee RSF ayaa sheegay in xikuumadda Itoobiya ay dhawaan xabsiga u taxaabtat labo suxufi oo Oromo ah oo ka shaqayn jiray tilifishinka dawlada, qaybtiisa Oromada.
Labadan suxufi oo lagu kala magacaabo Shiferraw Insermu iyo Dhabassa Wakjira, waxaa lagu eedeeyay inay xidhiidh la leeyihiin Ururka Oromada ee dagaalka hubaysan kula jira xukuumadda keligii taliye Meles Zenawi.
"Iyadoo Itoobiya isu diyaarinayso doorashaooyinkii qaranka, ayaa labadan suxufi lagu hayaa xabsi ay ururrada caalamiga ahi sheegeen in dadka lagu jidhdilo oo si xun loogula dhaqmo, sidaas waxaa sheegay radyowga Oromada ee RSF"
Raadyuhu wuxuu kaloo intaas ku daray in xukuumadda Itoobiya ay ku xadgudubto sharciga Midowga Afrika ee ku saabsan xuquuqda aadanaha iyo dadka, iyadoo waliba xarunta Midowga Afrika ay dhawr kiilo mitir u jirto meelaha ay xadgudbyadaasi ka dhacayaan.
Labadan suxufi ayaa xabsiga la iskaga hayaa iyadoo xukuumaddu ayna soo bandhigin wax caddaymo ah oo ku saabsan xidhiidhka ay la leeyihiin Ururka Oromoda ee xukuumadda kula jira dagaalka hubaysan.
Diblumaasi sare oo ka tirsan qaybta xidhiidhka dhibada ee xafiiska madaxwaynaha Eritereya ayaa ku gacan saydhay in dawlada Eritereya ay wax wada-xaajood ah ka gasho arrimaha go’aankii Guddiga Qaramada Midoobey ee ku saabsanaa soohdinta u dhexaysa Eritereya iyo Itoobiya.
Diblumaasigan, oo ka hadlay shirwayanaha 61aad ee Guddiga Xuquuqda Aadanaha ee Qaramada Midoobey, ayaa sheegay in "xorriyadu ay tahay halbowlaha asaaska u ah xuquuqda dadka bani’aadamka ah", dadwaynaha Eritereyana ay xorriyadu u tahay asaaska xuquuqda kale oo dhan. Wuxuu sidaas darteed sheegay in dadwaynaha Eritereya ay sii wadi doonaan diidamada ay diiddan yihiin isku day kasta oo lagu doonayo in meel lagaga dhaco ama xal dhexdhexaad ah lagaga galo xorriyadooda.
Diblumaasiga Eriteriyaanka ahi wuxuu sidoo kale sheegay in aqbalaadda wada-xaajood laga galo go’aankii soohdintu uuna ka dhignayn oo kaliya in meel lagaga dhaco xuquuqda iyo sharciyada ay leeyihiin dadwaynaha Eritereya, balse ay tahay in la caawinayo xoogagga doonaya inay burburiyaan qawaaniinta caalamiga ah, kuwaasoo uu ula jeedo xukuumadda Itoobiya oo iska indha-tirtay go’aankii Qaramada Midoobey ee soohdinta ku saabsanaa.
Wuxuuna beesha caalamka ka codsaday in xukuumadda Addis Ababa lagu cadaadiyo inay ka waantowdo xeerarka caalamiga ah ee ay ku tumanayso.
Dawladda Eritereya ayaa shardi ku xidhay ciidan ay Soomaaliya u soo dirto. Dawlada Eritereya waxay sheegtay inay Soomaaliya ciidan u dirayso haddii ciidanka Soomaaliya loo dirayo uu yahay mid ka socda Midowga Afrika, sidaas darteed waxay dawlada Eritereya mar kale ku celisay mawqifkeedii ahaa inaanay ka mid noqon doonin ciidan uu talada u hayo Urur Goboleedka IGAD.
Dawlada Eritereya ma ayna caddaynin sababta ay u diidayso inay qayb ka noqoto ciidamo uu maamulayo ururka IGAD, hase yeeshee dadka siyaasada gobolka u dhuun-duleela ayaa sheegaya in dawlada Eritereya ayna raalli ka noqonaynin in ciidammadeeda Soomaaliya la gaynayo ay Itoobiya talada u hayso, maadaama ay xukuumadda Itoobiya isku waddo inay iyadu hooggaamiso ciidammada IGAD ee Soomaaliya loo dirayo.
Dhinaca kale sargaal sare oo ka tirsan dawlada Kenya ayaa sheegay in dalalka Nayjeeriya iyo Koonfur Afrika ay doonayaan inay ciidan nabad ilaalin ah u diraan dalka Soomaaliya. Dawlada Kenya ayaa hadda ka hor labadan ka codsatay inay taageeraan ciidanka nabad ilaalinta ee dalalka IGAD ay doonayaan inay Soomaaliya u diraan.
"Maadaama ay Nayjeeriya iyo Koonfur Afrika yihiin walaalahayo naga awood badan waxaan ka ka codsanay inay Soomaaliya u diraan ciidan nabad ilaalin ah, sidaas waxaa yidhi Peter Ole Nkuraiya, oo ah wakiilka joogtada ah ee wasaarada arrimaha dibada ee dalka Kenya".
Nkuraiya ma aanuu sheegin xilliga ay labadan waddan ciidammada Soomaaliya u dirayaan, laakiin wuxuu tilmaamay inuu jecel yahay in ciidammada Nayjeeriya iyo Koonfur Afrika ay la shaqeeyaan ciidamada nabad ilaalinta ee Suudaan iyo Uganda ay Soomaaliya u dirayaan, kuwaasoo lagu wado inay bisha soo socota Soomaaliya gaadhaan.
Dhinaca kale ciidammadii ay xukuumadda Itoobiya ku soo daabushay xadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Ogaadeenya ayaa loo malaynayaa inay dib ula noqotay. Toddobaadyadii denbe oo dhan waxay xukuumadda Itoobiya ciidamo aad u tira badan u ku soo uruurisay xadka Soomaaliya iyo Ogaadeenya, gaar ahaan duleedka magaalada Gal-dogob ee gobolka Mudug iyo tuulada Axmed Gurey ee gobolka Galguduud.
Waxay kaloo Itoobiya ciidamo ku soo uruurisay magaalooyinka Feerfeer, Mustaxiil iyo Qallaafo ee fanka ku soo haya gobolka Hiiraan ee dalka Soomaaliya.
Dadka deggan nawaaxiga Balan-balle iyo Gal-dogob ayaa sheegaya in ciidammadii faraha badnaa ee beryahan fadhiyay nawaaxigaas aan dhawrkii maalmood ugu denbeeyay halkaas lagu arag, lana filayo inay fadhiisamadoodii dib ugu noqdeen.
Lama garanayo sababta ay xukuumadda Itoobiya ciidammadeeda dib ugu celisay, hase yeeshee waxaa hubaal ah in dib u-noqosahadani ay xidhiidh la leedahay diidamadii qayaxnayd ee dadwaynaha soomaaliyeed iyo Baarlamaanka Soomaaliya uu hordhigay in ciidamo Itoobiyaan ah nabad ilaalin loo keeno dalka Soomaaliya.
Faafin: Somalitalk.com | Maarso 24, 2005
»Shirkii Jamacada Carabta oo u ahaa fursad DFKMG
»Kismaayo: Hawlgal lagu soo qabqabanayo Burcadda